तिथि मेरो पत्रु »5नाश्ता पहिलो मिति प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ किन कारणहरू
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 20 2021 |2मिनेट पढ्न
तिनीहरूले कम दबाव छौं:
बिहान बैठक मिति को "गम्भीरता" लागि अपेक्षालाई दुवै पक्षलाई सकेसम्म कम हुन सक्छ अर्थ. यो तपाईं को या त एक bubbling मा बढ्तै अप्ठ्यारो वा आत्म सचेत महसुस हुनेछ कि संभावना छ, नास्ता-केन्द्रित रेस्टुरेन्ट, नास्ता को धेरै पटक परंपरागत एक कम महत्वपूर्ण कामकाज भएको छ कि एक छ रूपमा. तथापि, बस कफी लागि बैठक विपरीत, पूर्वनिर्धारित नास्ता मिति दिन बढी निर्माण-मा अवसर अन्य व्यक्ति को quirks चिन्नुको लागि. तिनीहरूले पेनकेक्स बनाम वाफल्स कस्तो महसुस गर्न आफ्नो अन्डा मा केचप मन कि सिकेर, नास्ता मिति प्रदान सजिलो "जाने-गर्न" कुराकानी विषयहरू तपाईं को न भन्न के सोच्न सक्नुहुन्छ गर्दा.
पछि के भइरहेको केहि को कुनै आशा छैन
सँगै शहर घुम्न आफ्नो मिति गरेको कोठाको निमन्त्रणा वा एक रात बाहिर हुनेछ भने यो सोच होस्, खाने मिति अक्सर बिल्कुल रात अन्त हुनेछ जब कसरी / बारेमा अनिश्चितता संग गर्दै छन्. नास्ता मिति संग, अर्कोतर्फ, अन्त समय एकदम सजिलै पूर्व-योजना हुन सक्छ. वास्तवमा, यो पनि सुरुमा मिति समय को स्थापना को भाग हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, 9am मा एक नास्ता मिति सुझाव पनि एक आकस्मिक सँगसँगै हुन सक्छ, "म एक गोल्फ खेल लागि योजना भयो 11;"यो बाटो, दुवै तपाईं आफ्नो मिति हुन् मा-यो-ठेगाना मिति पछिल्लो कसरी लामो बारेमा. यसबाहेक, दिन को आराम को लागि आफ्नो योजना प्रत्येक छलफल हुन सक्छ अर्को सजिलो "जाने-गर्न" कुराकानीको विषय तपाईं बिस्कुट र रस मा तल chomp जबकि.
तिनीहरू Easy-to-आंकडा-बाहिर ड्रेस कोड छ
एक पहिलो तारीख लागि एक संगठन चयन एक काम साक्षात्कार लागि आफ्नो दराज देखि आइटम छनौट भन्दा एकदम अधिक स्नायु-wracking हुन सक्छ. पहिलो छापे पक्कै महत्त्वपूर्ण छन्, तर तपाईं एक डेटिङ पहिलो छाप लागि हुनुपर्छ कसरी फै़शनवाला या आकस्मिक लगान अक्सर संलग्न सबै दलहरुको लागि नचाहँदा नचाहँदै तनाव को कारण छ. नास्ता संग, तथापि, विदेशको तैयार प्रश्न बाहिर लगभग निश्चित छ. Sweats मा देखाउने र एक टी-शर्ट या त शायद एक असल योजना छैन गर्दा, नास्ता मिति अझै पूर्वनिर्धारित आराम गरिदिएको, आकस्मिक (तर चिटिक्क) ड्रेस कोड.
तिनीहरूले अपेक्षाकृत सस्तो हुन सक्छ
बिल डेसर्ट गर्न स्नैक्स पेय गर्न ऐपेटाइजर देखि सुत्छन् सक्छ जहाँ एक खाने मिति विपरीत, नास्ता मिति लगभग सबै भन्दा स्थानहरुमा मा धेरै अपेक्षाकृत सस्ती हुन प्रत्याभूति छन्. पक्का, थप-ओन एक बिल कफी वा सुन्तलाको जुस आदेश वा हैश Browns को सट्टा एक फल सलाद पक्ष को लागि चयन समावेश हुन सक्छ, तर समग्र, नास्ता मिति को मूल्य भविष्यवाणी गर्न धेरै सजिलो हुन्छ. यो तपाईं र तपाईंको मिति दुवै लागि एक डबल बोनस छ: तपाईं एक संभावित खराब पहिलो तारीख मा तोड जाने छैनन्, र त्यो / त्यो तपाईं उहाँलाई भेट्न एक भारी राशि खर्च निराश हुनेछ / उनको.
तिनीहरूले च्याम्पियन के हुन्छ ...
ठीक, त्यसैले यो एक तान्नु को एक सा हुन सक्छ, तर अनुसन्धान नियमित अवसरमा स्वस्थ नास्ता खाने राम्रो समग्र स्वास्थ्य र वजन लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम भएको एक वृद्धि मौका संग सम्बन्धित छ भनेर देखाउँछ. वास्तवमा, एक सफल वजन यात्रामा रही शुरू लागि "सबै भन्दा राम्रो सुझाव" को एक हरेक दिन खाऊ छ. नास्ता खाने आफ्नो दिन सुरु गर्न एक स्वादिष्ट बाटो मात्र होइन, किनभने यो छ, तर यसको रातको उपवास मोड बाहिर आफ्नो चयापचय लात-सुरु गर्न एक stellar तरिका पनि हो. बस राखे, नास्ता आफ्नो मिति निम्त्याउनु भन्न ठूलो तरिका हो, "अरे, म मेरो स्वास्थ्य चासो राख्ने कुनै छु, र म अझै पनि तपाइँको ख्याल सक्छ!"
डेटिङ र नाता को अर्थको